Xukun lagu ridey shaqsi qarxin rabay Tiyaatarka Qaranka | KEYDMEDIA ONLINE
Xukun lagu ridey shaqsi qarxin rabay Tiyaatarka Qaranka
Ninkaan ayaa lagu eedeeyey inuu isku diyaarinayey Qarax uu ka fuliyo Tiyaatarka Qaranka.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay maanta xukun ku riddey Nin la sheegay inuu watay Boorso ay ka buuxeen walxaha qarxa, islamarkaana ay qabteen ciidamada ammaanka.
Eedeysanahan oo lagu magacaabo Xasan C/laahi Aadan ayaa lagu qabtay Ex-control Afgooye, waxaana la sheegay in uu isku diyaarinayey qarxinta Tiyaatarka Qaranka waa sida qoraalka maxkamadda lagu sheegaye.
Maxkamadda ayaa sheegtay in baaritaan dheer kadib Xasan Cabdullaahi Aadan uu qirtay in Sanad iyo xoogaa uu lasoo shaqeeyay Kooxda Al-shabaab, waxa uuna Alshabaab kaga biiray Buur Dhuxunle oo ka tirsan Gobolka Bakool Sanadkii 2018.
Booqashadda Ben Wallace ee Villa Somalia waxaa ku wehelinayay Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Mudane Ben Fender.
Mudo-kordhin loo sameeyay Howlgalka Turkiga ee xeebaha Soomaaliya
Warar 27 January 2021 13:01
Soomaaliya oo ku gacan seyrtay Warbixinta Gudiga IGAD
Warar 27 January 2021 11:18